सिटिजन सेलिब्रेटी - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
सुरुमा छुट्टाछुट्टै एकाउन्ट बनाएका थिए– प्रिज्मा र प्रिन्सीले । एक दिन उनीहरूकी दिदी आइशा खतिवडाले भनिन्, ‘ट्विन्सहरूको भिडियो हिट छ, तिमीहरू पनि बनाओ न । कति राम्रो देखिन्छ ।’ प्रिज्मा र प्रिन्सीले पनि ट्विन्सहरूका भाइरल भैरहेका भिडियो हेरेका थिए । उनीहरूलाई दिदीको सुझाव मन पर्‍यो । उनीहरूले टिकटकका लागि पहिलो भिडियो बनाए– ‘बाटैमा भेट भयो, रहेछ कालेकाले....’ गीतमा ।
समाजमा केही यस्ता पात्र छन्, जो न नाम चलेका कलाकार हुन्, न नेता न सार्वजनिक रूपमा कहलिएका व्यक्तित्व नै । आमनागरिककै जीवन बाँचिरहेका उनीहरूको छवि सामाजिक सन्जालमा भने सेलिब्रेटीको छ ।
फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, इन्स्ट्राग्राम आदिको दुनियाँमा उनीहरू कैयौंको मनमा बसेका छन्, व्यापक दायरामा चिनिएका छन् । कुनै खास सार्वजनिक छवि नभए पनि सामाजिक सन्जालमा थुप्रै फ्यान बटुल्न सफल यस्ता ‘सिटिजन सेलिब्रेटी’हरू बग्रेल्ती फेला पर्छन् । तिनैमध्येका हुन्, टिकटकमा ‘ट्विन्नी गल्र्स’का रूपमा नेपालसँगै भारतमा छाइरहेका प्रिज्मा एन्डप्रिन्सी खतिवडा तथा दीपा–दमन्ता श्रेष्ठ ।
प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा जुम्ल्याहा दिदीबहिनी हुन् । चाबहिल, काठमाडौंका यी दिदीबहिनीमा प्रिज्मा जेठी हुन् भने प्रिन्सी कान्छी । दिदी प्रिज्मा मेधावी कलेजमा बीएचएम थर्ड सेमेस्टरकी छात्रा हुन् भने कान्छी प्रिन्सी नाट कलेजमा डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउन्ड अप्रेसन अध्ययनरत छिन् । अनुहार, शारीरिक हाउभाउ, स्वभाव हरेक कुरा उस्तै देखिनु उनीहरूको विशेषता हो । यही विशेषतासँग सोसल मिडिया जोडिएपछि अहिले उनीहरू छोटा सांगीतिक भिडियोका लागि चर्चित टिकटकमा सम्भवत: नेपालकै सर्वाधिक बढी फ्यान कमाउने जोडी भएका छन् ।
उनीहरूको संयुक्त टिकटक एकाउन्ट ‘ट्विन्नी गल्र्स’लाई २४ लाखभन्दा बढीले पछ्याएका छन् । भने प्रिज्माको ब्यक्तिगत टिकटक एकाउण्टमा ४ लाख १९ हजार बढी फ्यान छन् । जबकि नेपालमा सामाजिक सन्जालकी सबैभन्दा हिट अभिनेत्री प्रियंका कार्कीका टिकटक फ्यान २ लाख १८ हजार मात्र छन् ।
यी दिदीबहिनी २१ वर्षका मात्र भए । आत्मविश्वासले भरिपूर्ण संवाद, मिल्दोजुल्दो आकर्षक अनुहार र कलात्मक प्रस्तुति नै उनीहरूलाई टिकटकमा धेरैले रुचाउनुका खास कारण हुन् । ‘हामी सानैदेखि डान्स गर्न खुबै रुचाउथ्यौं,’ हालैको एक मध्याह्न केएल टावरस्थित एक क्याफेमा प्रिन्सीले सुनाइन्, ‘गीत बज्यो कि शरीर आफैं डान्स गर्न थालिहाल्थ्यो ।’ टिकटक चलाउन थालेको पाँच महिना नबित्दै उनीहरूले पाएको भव्य फ्यान फलोअर्सको मुख्य कारण एउटै देखिने आकर्षक लुक्स, उत्कृष्ट एक्प्रेसन तथा पर्फेक्ट टाइमिङमा बनाइएका टिकटक भिडियो हुन् । यी दुई दिदीबहिनीको बन्डिङ पनि उत्कृष्ट छ ।
सुरुमा छुट्टाछुट्टै एकाउन्ट बनाएका थिए— प्रिज्मा र प्रिन्सीले । एक दिन उनीहरूकी दिदी आइशा खतिवडाले भनिन्, ‘ट्विन्सहरूको भिडियो हिट छ, तिमीहरू पनि बनाओ न ।
कति राम्रो देखिन्छ ।’ प्रिज्मा र प्रिन्सीले पनि ट्विन्सहरूका भाइरल भैरहेका भिडियो हेरेका थिए । उनीहरूलाई दिदीको सुझाव मन पर्‍यो । उनीहरूले टिकटकका लागि पहिलो भिडियो बनाए— ‘बाटैमा भेट भयो, रहेछ कालेकाले....’ गीतमा । उक्त ट्विन्स भिडियो पहिले प्रिन्सीको एकाण्उटमा अपलोड गरियो । हिट भएपछि त्यो एकाउण्टको नाम परिवर्तन गरेर ‘ट्विन्नी गल्र्स’ बनाए । त्यसपछि उनीहरूको एकाउन्टमा फ्यान संख्या बढ्न थाल्यो । त्यसको दुई दिनपछि नोटिफिकेसनको बाढी नै आयो । ‘त्यो बेलाको त्यस्तो प्रतिक्रिया चमत्कारिक थियो,’ प्रिज्माले भनिन्, ‘त्यसले हामीलाई निकै उत्साहित बनायो ।’
बलिउड गीत ‘मेरे सरकार...’ को टिकटक भिडियोपछि त उनीहरूले कल्पनै नगरेका फ्यान पाए ।
त्यो गीत भारतमा इन्स्ट्राग्राममा तत्काल भाइरल हुन थाल्यो । ‘इन्स्ट्राका पेज तथा स्टोरीहरूमा सेयर हुन थालेपछि हाम्रो खुबै पब्लिसिटी भयो,’ प्रिज्माले भनिन् । कसैले जोडी नटुटोस भनेर विस गर्न थाले भने कतिले एकदमै राम्रो भनेर फुर्काउन थाले । कमेन्टहरूमा उनीहरूको प्रशंसा हुन थाल्यो । कतिले त भने, ‘तिमीहरू एक जना भए नर्मल मानिस हौ, जब दुई जना भयौं, त्यसले नै तिमीहरूलाई विशेष बनायो ।’ ‘हाम्रो बन्डिङ र पर्फेक्ट टाइमिङलाई सबैले रुचाइदिनुभएको छ । हाम्रो टाइमिङ एकदमै म्याच हुन्छ,’ प्रिज्माले भनिन् । ‘गड गिफ्ट नै भनुम् न,’ प्रिन्सीले आफूलाई रोक्न सकिनन् । ‘सुरुवात गर्दा यहाँसम्म आउला भनेर कल्पनासम्म गरेका थिएनौं,’ दुवै दिदीबहिनीले स्वरमा स्वर मिलाउँदै भने । उनीहरू ट्विन्नी गल्र्सका लागि भिडियो मेकिङ गर्न आइफोन प्रयोग गर्छन्, जसलाई उनीहरू साथ लिएर हिँड्दैनन्, घरमै राख्छन् ।
अहिले उनीहरूको टिकटक एकाउन्टमा २६ वटा भिडियो मात्र छन् । यति थोरै भिडियो बनाएर पनि यति भव्य फ्यान आखिर कसरी ? ‘बलिउड सङमा काम गर्‍यौं, इन्डियनहरूलाई खुब मन पर्‍यो,’ प्रिन्सीले कारण खोलिन्, ‘म्याक्सिमम फ्यान भारतकै छन् । नेपाली गीतमा काम गरेपछि उनीहरूलाई कमेन्ट आउँछ, बलिउड सङमा सुहाउँछ, हिन्दीमा गर्नु न’ भन्ने यो मन त मेरो नेपाली त्यसै भनिएको होइन्, प्रिज्मा र प्रिन्सीलाई पनि नेपाली गीतमा भिडियो बनाएर अपलोड नगरेसम्म चित्त बुझ्दैन ।
ट्विन्नी गल्र्स एकाउन्टमा सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियो ५२ लाखभन्दा बढीले हेरेका छन् भने सबैभन्दा बढी लाइक पाउने भिडियोले २२ लाख लाइक पाएको छ । ‘मेरे विन्दिया इशारा करे’ गीतमा बनाइएको टिकटक भिडियो सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियो हो । नेपालीमा भाइरल भएको भिडियो भने
‘बाटैमा भेट भयो...’ हो । बिहानदेखि साँझसम्मै अलग–अगल ठाउँमा व्यस्त हुने भएकाले उनीहरूको भिडियो एकदमै ढिलो अपलोड हुन्छ । ‘हामी एक शनिबार तीन–चार घण्टा फुर्सद निकालेर भिडियो बनाउँछौं,’ प्रिन्सी भन्छिन्, ‘चार–चार दिनको ग्यापमा पनि भिडियो अपलोड हुन्छ, कहिलेकाहीं १५–२० दिनसमेत लाग्छ ।’ प्रिज्मा र प्रिन्सी मिलेर भिडियो मेकिङको क्रिएटिभ कन्सेप्ट बनाउँछन् । ‘रिटेक दुई–तीन पटक मात्र गर्नुपर्छ,’ प्रिज्मा भन्छिन् । कारण, एक–अर्काको एक्प्रेसन टाइमिङ जसलाई उनीहरू दुवै जना गड गिफ्टेड बन्डिङ मानेका छन् । यही लोकप्रियताका कारण नै अहिले उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता, म्युजिक भिडियो तथा चलचित्रबाट अफर आउन थालेको छ ।
उमेरले १९ वर्षका मात्र हुन्— दमन्ता र दीपा श्रेष्ठ । यी जुम्ल्याहा दिदीबहिनीमध्ये दमन्ता जेठी हुन् भने दीपा कान्छी । उनीहरूको घर ताप्लेजुङ हो, तर अहिले काठमाडौंको पेप्सिकोलामा बस्छन् । उनीहरू तीनकुनेको ट्रिटोन कलेजमा कक्षा १२ मा म्यानेजमेन्ट पढिरहेका छन् । दुरुस्तै उस्तै देखिनु, एउटै बोलीचाली र हाउभाउ यी ट्विन्स सिष्टरको विशेषता हो ।
एउटै शारीरिक बनावटका यी दिदीबहिनीको कथा अलि बेग्लै छ । त्यो कथा पनि सोसल मिडियाकै पावरमा उनिएको हो । ०७४ को फागुनमा पहिलोपल्ट उनीहरूले टिकटकका लागि भिडियो बनाएका थिए, साथीहरूको लहैलहैमा लागेर । अंग्रेजी गीत ‘यू से यू लभ’मा तयार पारिएको उनीहरूको भिडियोले क्रमश: फ्यान बटुल्न थाल्यो । डबम्यासका रमाइला भिडियो उनीहरूले फेसबुकतिर देखेका थिए, त्यसपछि उनीहरूले म्युनिकल्लीबाट रमाइला भिडियो बनाउन थाले । ‘बाहिरतिरका ट्विन्सहरूले पनि भिडियो बनाएका देखेका थियौं,’ दीपा भन्छिन्, ‘उनीहरू मज्जाले प्रस्तुत हुन्थे, हामीले पनि उनीहरूलाई नै पछ्याउँदै भिडियो बनाउन थाल्यौं ।’
मोबाइल फोनबाटै भिडियो बनाउने उनीहरूले अहिलेसम्म १ सय ७ वटाभन्दा बढी भिडियो टिकटकमा अपलोड गरिसकेका छन् । दीपादमन्ता नामक उनीहरूको टिकटक एकाउन्टमा ६ लाख ७१ हजार फ्यान छन् । मानिसहरूलाई आकर्षण गर्ने किसिमका भिडियो कसरी तयार पार्छन् त उनीहरू ? भन्छन्, ‘एउटै ड्रेसमा पहिले प्राक्टिस गर्छौं अनि रेकर्डतिर लाग्छौं । ‘पाँच–छ पटक रिटेक गर्नुपर्छ,’ दीपाले भनिन् । पाँच पटक मात्र ? दमन्ताले थपिन्, ‘कहिलेकाहीं त १० पटक पनि रिटेक गर्नुपर्छ ।’ उनीहरूको सर्वाधिक हेरिएको भिडियोले १९ लाख बढी भ्यू पाएको छ ।
‘गाजलु ती आँखा मेरा’ नेपालीमा सबैभन्दा बढी लाइक पाउने भिडियो हो भने हिन्दीमा भने ‘मै तेरे जसा मे नहीआउँगी...’ ले सर्वाधिक दर्शक पाएको छ । दीपा–दमन्ता अहिले दैनिक पाँच–छवटा भिडियो बनाउँछन्, तर सातामा ३ वटाजति भिडियो मात्र अपलोड गर्छन् । ‘बनाएजति सबै भिडियो अपलोड गर्न लायक पनि हँुदैनन्, बनाइएकाबाट उत्कृष्ट छानेर हप्तामा तीन–चारवटा भिडियो अपलोड गर्छौ,’ दीपाले भनिन् । टिकटकमा पाइरहेको रेस्पोन्सले उनीहरूलाई पुलकित बनाइरहेको छ । सुरुसुरुमा कतिले तिमीहरू ट्विन्स भएर मात्र फ्यान पाएको हो भने, केहीले तिमीहरूको एक्प्रेसन नै छैन् भनेर पनि कमेन्ट गरे, तर उनीहरूले मेहनत गर्न छाडेनन् । त्यसैको परिणाम नै मान्नुपर्छ, अहिले उनीहरूलाई कतिले अन्तर्वार्ताका लागि समय माग्छन् भने कोही मोडलिङको अफर गर्छन् । ‘भारतबाट मोडलिङका लागि अफर आएको छ,’ दमन्ताले टिकटकको प्रभाव सुनाइन् । टिकटकको भिडियोकै कारण उनीहरूले योहो युट्युब टिभीको ‘डबल ट्रबल’ शीर्षकको कार्यक्रममा प्रस्तोताका रूपमा काम गर्ने अफर पाएका छन् । टिकटकबाहेक इन्ट्राग्राम पनि चलाउने यी ट्विन्ट सिस्टर फेसबुक तथा ट्विटरमा भने झुन्डिदैनन् ।
उस्तै रुचि, उस्तै आनीबानी
सरकारी जागिरे बुवाकी छोरी प्रिज्मालाई घरमा बोलाउने नाम नानी हो भने प्रिन्सीको काली । दिदी पिज्जाप्रेमी छिन् भने बहिनीलाई म:म मन पर्छ । त्यसबाहेक प्रिज्मालाई भुटन पनि मन पर्छ । प्रिन्सीको भने म:म र ससेज अलटाइम फेबरेट हो । दुवैजना लाफिङ प्रेमी । दुवै जनालाई साउथ इन्डियन फिल्म खुबै मन पर्छन् । उनीहरूको फेबरेट कलर ब्ल्याक, पिंक र डार्क हो । ‘हामी लाइट रुचाउँदैनौं,’ प्रिन्सी भन्छिन् । एक जनाले छनौट गरेको लुगा अर्कोलाई मन परिहाल्छ । प्रिज्मा र प्रिन्सी दुवैलाई डान्स अति मन पर्छ । उनीहरू चलचित्र हेर्न तथा घुमघाम गर्न पनि रुचाउँछन् । उनीहरूमध्ये एक जनाले आइफोन चलाउँछिन्, अर्कीले ओप्पो ।
आइडियल हाइयर सेकेन्डरी स्कुलबाट एसएलसीमा डिस्टिङसन ल्याएका थिए यी दुवै दिदीबहिनीले । रोचक त के भने प्रिन्सीले दिदी प्रिज्मालाई मात्र प्वाइन्टले जितेकी थिइन् । ‘८१ प्रतिशत हो, प्रिन्सीले मलाई प्वाइन्टले जितेकी छ,’ प्रिज्माले भनिन् । उनीहरूले ह्वाइट हाउस कलेजबाट साइन्समा प्ल टु गरे । त्यहाँको रिजल्ट पनि लगभग उस्तै छ, प्वाइन्टले मात्र तलमाथि । प्लस टु पढ्दा बिएस्सी नर्सिङ गर्ने दुवै दिदीबहिनीको चाहना थियो तर पछि मन बदलियो ।
प्लस टुपछि प्रिन्सी डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउन्ड अप्रेसन पढ्न थालिन् भने दिदी प्रिज्माले ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट ज्वाइन गरिन् । ‘दिदीबहिनीलाई कसरी छुट्टिन मन लाग्यो त ?’ ‘मनले होइन, परिस्थितिले,’ प्रिज्माले हाँस्दै भनिन् । यी दुवै दिदीबहिनीबीच कहिलेकाहीं ठाकठुक नपर्ने होइन, तर उति धेरै झगडा भने हुँदैन ।
दीपा र दमन्ताको कुरा पनि उस्तै छ । दीपालाई जे मन पर्छ, दमन्ता पनि त्यही खान्छिन् । दुवै दिदीबहिनीको चाहना एयरहोस्टेज बन्ने छ भने नृत्य पनि उनीहरूको रुचीको कुरा हो । दमन्ता दीपाको तुलनामा कम सक्रिय छिन् । पहिले–पहिले दमन्ताका लागि सपिङ पनि दीपाले नै गरिदिन्थिन् । अहिले भने दीपा–दमन्ता उस्तै–उस्तै लुगा किन्छन् । सँगै कलेज जान्छन्, जे गर्दा पनि लगभग सँगै हुन्छन् । छुट्टिएर हिँड्दा पनि उनीहरूलाई के छुटाए–के छुटाए जस्तो हुन्छ ।
श्रेष्ठ दिदीबहिनीलाई कोरियन ड्रामा खुबै मन पर्छ । युट्युब तथा म्युजिकल्ली हेर्न रुचाउने उनीहरूले नेपाली चलचित्र नहेरेको दुई वर्ष भैसकेको छ । ‘प्रियंका आयुषमान देशराजलाई चिन्छौं, वर्षा राउत तथा नम्रताहरू टिकटकमा देखिने भएकाले चिन्छौं, तर अरू नेपाली हिरो–हिरोइन चिन्दैनौं । कोरियनजस्तो भएकाले धिरज मगरलाई पनि चिन्छौं,’ उनीहरूले एकसाथ भने ।
ब्लू र ग्रिन उनीहरूलाई मन पर्ने कलर हुन् । उनीहरू दुवै जनाको फेबरेट खान्की बफ म:म हो । ‘अरू म:म मन पर्दैन, बफ भयो भने जति पनि खान सक्छु,’ दीपाले भनिन् । दुवै जना कुकिङका पनि उत्तिकै सौखिन छन्, मम, वर्गर, थुक्का, पास्ता आदि परिकार घरमै बनाइरहेका हुन्छन्, त्यसका लागि उनीहरू युट्युबको सहारा लिन्छन् ।
उनीहरूको पढाइ पनि उस्तै–उस्तै छ । मोनास्टिक पब्लिक स्कुल काँँडाघारीबाट दीपाले ८६ दशमलव ६८ तथा दमन्ताले ८६ प्रतिशत ल्याएर एसएलसी उतीर्ण गरेका हुन् । अल्छी लागे उनीहरू कि सुत्छन् कि मोबाइल हेर्छन् । दीपालाई दमन्ताको अल्छी स्वभाव मन पर्दैन । ‘यसको रिसाहा स्वभाव मलाई मन पर्दैन,’ दमन्ताले भनिन्, ‘एकदमै लडाइँ पर्छ, जे कुरामा पनि ।’ एकदिन दमन्तालाई दीपाले कपले हानिदिएकी थिइन् । ‘अहिले भने यसको रिस कम हुँदै गएको छ,’ दमन्ताले भनिन् । झगडा भए पनि उनीहरू मिल्न पाँच मिनेट पनि लाग्दैन ।
यो दुई जोडी ट्विन्ट सिस्टरका केही समान पक्षहरू पनि छन् । झट्ट हेर्दा दिदीहरू बहिनीजस्ता र बहिनीहरू दिदीजस्ता देखिन्छन् । सबैले दीपालाई नै जेठी भन्छन् । यस्तै समस्या छ प्रिन्सीको पनि ।
यी पनि ट्विन्स सेलिब्रेटी
इच्छिता–विच्छिता— ३ लाख २४ हजार फ्यान
निक्की–लिटिल— १ लाख ६२ हजार फ्यान
लिसा क्षेत्री— ८१ हजार ५ सय फ्यान
स्वीकृति–संस्कृति— ५१ हजार ४ सय फ्यान
अमृत–अमर (दाहाल ट्विन्स)— ३१ हजार ४ सय फ्यान
सुना–सुला— ३० हजार ५ सय फ्यान
सिसन–सुसन— १२ हजार ४ सय फ्यान